‘हेभीवेट’ उम्मेदवारका कारण चितवनको चुनाव पेचिलो बन्दै ! | चितवन पोष्ट
गृह » ‘हेभीवेट’ उम्मेदवारका कारण चितवनको चुनाव पेचिलो बन्दै !
‘हेभीवेट’ उम्मेदवारका कारण चितवनको चुनाव पेचिलो बन्दै !
– बसन्त पराजुली
२०७० सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला एकाएक चितवन–४ मा आएर चुनाव लड्नुभएकै कारण चितवन चर्चामा रह्यो । उहाँ चितवनवाट भारी मत अन्तरले चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । तर, त्यही कोइरालाले चुनाव जितेकै क्षेत्रलाई समेत समायोजन गरी बनाइएको चितवन ३ मा यो वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव लड्नुभएपछि चितवनले योपटक पनि चर्चा पाएको छ ।
आफ्नै गृह जिल्ला चितवनबाट प्रचण्ड पहिलोपटक चुनावमा उठ्नुभएको हो । चितवन ३ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार प्रचण्डसँग लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री एवं राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यस्तै, एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य पूर्वअर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे (क्षेत्र नम्बर १), कांग्रेस नेता एवं शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी (चितवन क्षेत्र नम्बर २) को उम्मेदवारीले ‘हेभीवेट’का बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाले यसपटकको चुनाव चितवनमा पेचिलो बनेको छ । चितवनमा तीन लाख ५४ हजार ३६ मतदाता छन् । दोस्रो चरणअन्तर्गत मंसिर २१ गते हुन लागेको यो निर्वाचनमा स्थानीय निकायको चुनावभन्दा ४१ हजार ३४ जना मतदाता नयाँ थपिएका हुन् । निर्वाचनका लागि १६१ स्थानमा ४०८ निर्वाचन केन्द्र रहने छन् । यसका लागि अहिले उम्मेदवारहरु बीचमा मतदातालाई कसरी आकर्षण गर्ने भन्ने होड चलिरलेको छ । मह¤वाकांक्षी योजना
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र वनमन्त्री पाण्डेबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा रहेको चितवन–३ मा निर्वाचन जित्नेमा दुवै विश्वस्त देखिन्छन् । यद्यपि, साना दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि आफू जित्ने दाबी गर्छन् । यो क्षेत्रमा प्रचण्ड र पाण्डेसँगै १४ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । चुनाव जित्नकै लागि प्रमुख दलका नेताहरुले मतदातालाई आकर्षण गर्न मह¤वाकांक्षी योजनाहरु अघि सारेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको १९ वटा वडा र माडी नगरपालिका रहेको यो क्षेत्रमा वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने वाम गठबन्धनका उम्मेदवार प्रचण्ड बलिया देखिन्छन् । स्थानीय चुनावमा एमाले र माओवादीको भोट ४२ हजार ४३६ थियो । यो चुनावमा जब कि कांग्रेस–राप्रपाको भोट ३५ हजार ४०९ हो ।
‘मतान्तर धेरै भएका कारण पनि चुनाव जित्ने कुरामा सन्देह छैन, मात्रै मत कति फरक भन्ने हो’, वाम गठबन्धनका युवा परिचालन समितिका संयोजक श्रीप्रसाद दवाडीले भन्नुभयो । तर, लोकतान्त्रिक गठबन्धन यो मान्न तयार छैन । ‘विगतका निर्वाचनलाई मूल्यांकन गरियो भने गलत सावित हुन्छ । यो क्षेत्र लोकतन्त्रवादीहरुको बलियो आधार क्षेत्र हो’, मन्त्री पाण्डेका निजी सचिव राजु भण्डारीले भन्नुभयो । मन्त्री पाण्डे विगतमा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद् हुनुहुन्छ । तर, प्रचण्ड चितवनकै भए पनि अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौँ र सिरहाबाट चुनाव लड्नुभएको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने उहाँ रोल्पा र काठमाडौँबाट चुनाव लड्नुभएको थियो । त्यसैले, प्रचण्डमाथि ‘फिरन्ते’ वा ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारको आरोप प्रतिपक्षीहरुको छ । तर, प्रचण्ड आफैँ भने यसको खण्डन गर्नुहुन्छ ।
‘जनयुद्धको आधार क्षेत्र भएकै कारण पहिलोपटक म रोल्पा र काठमाडौँलाई जोड्न त्यहाँका क्षेत्रबाट चुनाव लडेँ । दोस्रोपटक मधेसको आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण त्यहाँका जनताको भावनासँग एकाकार हुन सिरहा पुगेँ । अब आफ्नै गृह जिल्लाको विकास र समृद्धि गर्ने गरी चितवन आएको हँु’, प्रचण्डले भन्नुभयो ।
उसो त, मन्त्री पाण्डेमाथि पनि संविधानसभा सदस्य जितेपछि क्षेत्रको विकासमा खासै उल्लेखनीय काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, पाण्डे आफैँ त्यसको खण्डन गर्नुहुन्छ । ‘प्रतिपक्षीहरुले लगाउने आरोप मात्रै हो । तर, मैले मेरो क्षेत्रको सडकको स्तर वृद्धि, पुल निर्माण, माडीमा बिजुली पु¥याउने कामजस्ता ठूल्ठूला योजना पूरा गरेको छु’, मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । एमालेको समर्थन लिए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेभित्रैका एक धारले असहयोग गर्ने हुन् कि भन्ने शंका पनि छ । द्वन्द्वकालकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको बाँदरमुढे क्षेत्र पनि यही क्षेत्रमा पर्ने हुँदा द्वन्द्वकालका घटनाहरु बढी बल्झिए भोट घट्ने सम्भावना र चुनौती पनि छ । अझै छोरा प्रकाश दाहालको निधनपछि धार्मिक रुपमा गरिने काजकिरिया नगर्दा धार्मिक आस्थाका मतदाताहरुले भोट नदिने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा श्रीमती गुमाएका टंक रेग्मी गोर्खाली वैद्य माओवादीबाट उम्मेदवार बनेपछि उहाँले पनि भोट काट्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । यद्यपि, प्रचण्ड आफैँ भने अहिले कांग्रेसलाई गाली नगरी रिझाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । हरेक चुनावी सभाहरुमा उहाँले कांग्रेस नेताहरुको नाम नै लिएर प्रशंसा गर्ने गर्नुहुन्छ । तर, स्थानीय निकायमा छोरी रेणु दाहाललाई चुनाव जिताएका कांग्रेसजन अहिले गठबन्धन परिवर्तनसँगै असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले सजिलै प्रचण्डलाई भोट दिने सम्भावना पनि कम देखिन्छ । उता, मन्त्री पाण्डे पनि एमालेलाई फकाउँदै हुनुहुन्छ । दुवै उम्मेदवारले विपरीत गठबन्धनको भोट जसले बढी लिन्छ, उसैले चुनाव जित्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
आधार इलाका भत्काउने र जोगाउने होड ः वाम गठबन्धनले चितवन क्षेत्र नम्बर–१ लाई आफ्नो आधार इलाका मान्छन् । तर, अहिले यो आधार इलाका भत्काउने र जोगाउने होडमा उम्मेदवारहरु छन् । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे दोस्रोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका कारण पनि यो क्षेत्र अलि बढी चर्चामा नै छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनले यो क्षेत्रमा कांग्रेसका महासमिति सदस्य राजेन्द्र बुर्लाकोटीलाई चुनावी मैदानमा उठाएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पाण्डेले नै बुर्लाकोटीलाई तीन हजार ४९ मत अन्तरले हराउनुभएको थियो । दुवै दलले योपटक पनि उनै उम्मेदवारलाई दोहो¥याएका छन् । स्थानीय तहको चुनावलाई हेर्ने हो भने चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा परेका तीन नगरपालिका (रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती)मा नेकपा एमालेले जितेको ठाउँ हो । त्यसैले पनि एमाले यो क्षेत्र आफैँ जित्नेमा विश्वस्त देखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार बुर्लाकोटी त्यो मान्न तयार हुनुुहुन्न । ‘चितवन क्षेत्र नम्बर–१ कसैको गढ होइन, कसैको पेवा होइन । यदि कसैले यसलाई आफ्नो गढ मान्छ भने यसपटक भत्कन्छ’, बुर्लाकोटीले भने । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे क्षेत्र एकलाई यसपटक पनि वाममय बनाउने दाबी गर्नुहुन्छ । ‘म अर्थमन्त्री हुँदा मेरो क्षेत्र नम्बर–१ मा दुई अर्बभन्दा बढीको विकास बजेट पारेको छु । भित्रभित्रका बाटो कालोपत्रे गरेको छु । विकास गर्ने नेतालाई जनताले जिताउँछन् कि अरुलाई ? अवश्य विकास गर्ने सुरेन्द्र पाण्डेलाई नै जिताउने छन्’, पाण्डेले भन्नुभयो । राजेन्द्र बुर्लाकोटी २०३७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर लागेका नेता हुनुहुन्छ । उहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि हो । सुरेन्द्र पाण्डे झापा आन्दोलनदेखि जनआन्दोलनसम्म निरन्तर एमालेमा लागेका विकासप्रेमी नेता हुनुहुन्छ । दुवै नेताको चुनावी प्रतिस्पर्धाले यो क्षेत्र अहिले पेचिलो बनेको छ । सुरेन्द्र र राजेन्द्र दुवै नेताले चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा जित्ने दाबी गर्नुहुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलका वडा अध्यक्षहरुले पाएको मतलाई विश्लेषण गर्दा यो क्षेत्रमा पनि वाम गठबन्धन नै बलियो देखिन्छ । तर, त्यसलाई मात्र हेरेर नहुने र यसपटक आफूले नै जित्ने दाबी गर्नुहुन्छ नेता बुर्लाकोटी । स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा वाम गठबन्धनको मत ४४ हजार ६७४ छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुल ३२ हजार ११० मत छ । स्थानीय तहको मतले मात्रै निर्वाचन जित–हारको अनुमान गर्न नसकिने बताइन्छ । क्षेत्र नं १ मा एक लाख १९ हजार ९९८ मतदाता रहेका छन् । यो क्षेत्रमा रहेका १३ जना उम्मेदवार आफू जित्ने दाबी गर्दैछन् । तर, लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनबचका उम्मेदवारमै यहाँ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यो क्षेत्रमा उनीहरुको चुनावी मुद्दा पनि समानजस्तै छ
। कयर राप्तिको तटबन्धन, खैरहनीमा बाल अस्पताल, निकुञ्ज र बस्तीबीचमा पर्खाल, सौराहालाई देशकै दोस्रो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने दुवै उम्मेदवारको समान एजेन्डा हो । पाण्डेले लोथरदेखि सौराहा हुँदै गोलाघाट, देवघाटबाट लोथर सडक निर्माणको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ भने बुर्लाकोटीले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सिंचाइ र खानेपानीको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना अघि सार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । चर्को प्रतिस्पर्धा
चितवन–२ मा यतिबेला १५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यहाँ पनि अन्य उम्मेदवारका तुलनामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु बीचमै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धन दुवैतर्फका उम्मेदवार अनुभवी हस्ती मानिन्छन्, जो एकअर्कालाई पराजित गर्न लागिपरेका छन् । तर, दुवै जना आफू जित्ने दाबी पनि गर्छन् । यो क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकतर्फ उम्मेदवार शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी र वाम गठबन्धनका तर्फबाट पूर्वसांसद् तथा एमाले चितवन जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोख्रेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । २०७० सालको चुनावमा अधिकारी चितवन २ बाट र पोख्रेल चितवन ३ वाट चुनाव जित्नुभएको थियो । पोख्रेल नयाँ संविधान निर्माणमा आफू संविधान मस्यौदा समितिमा बसेर धेरै काम गरेकाले अव विकास र समृद्धिका लागि पनि आफूलाई मतदाताले विश्वास गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार अधिकारी मतदातालाई रिझाउनका लागि जिल्लालाई नै वित्तीय राजधानी बनाउने संकल्प गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ मा १ लाख ८ हजार २१९ मतदाता छन् । यहाँ ४३ वटा मतदानस्थल तोकिएका छन् भने कालिका नगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ७, १०, ११, १२ र २९ वडा समेटिएका छन् ।
इच्छाकामना गाउँपालिकामा स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसले जितेको क्षेत्र हो भने कालिका नगरपालिका एमालेले जितेको क्षेत्र हो । स्थानीय चुनावमा वडा अध्यक्षले पाएको भोटलाई आधार मान्ने हो भने यो क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको एक घटक एमालेले २७ हजार ६३८ र दोस्रो घटक माओवादीले ११ हजार ६०४ मत ल्याएको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा कांग्रेसले २४ हजार ७५५ र राप्रपाले एक हजार ७५४ मत प्राप्त गरेका थिए । तर, स्थानिय निकायमा झरेको मतलाई निर्णायक मान्न सकिँदैन ।
कांग्रेस उम्मेदवार राज्यमन्त्री अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘जनताले मैले गरेको कामको मूल्यांकन गरेका छन् । भोलि देशमा कांग्रेसले मात्रै समृद्ध विकास गर्छ भन्ने बुझेका छन्, त्यसैले यो मेरो जित्ने आधार हो ।’ एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएका उम्मेदवार पोख्रेल पनि चुनाव जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । ‘अहिले यो बेलामा पनि नजिते कहिले जित्ने ?’, उहाँको प्रतिप्रश्न छ ।
अग्रगामी प्रचण्ड कि पश्चगामी पाण्डे ?
साहित्य र समाज